Sida loo beddelo midabka qoraalka Photoshop | Abuurista khadka tooska ah
Sida loo beddelo midabka qoraalka Adobe Photoshop
Manuel Ramirez | | Photoshop, Tababarada
Maalmahan ka hor waanu ku baranay beddel asalka sawirka iyadoo la adeegsanayo aaladaha kala duwan in aan ku leenahay Photoshop, ama shalay oo leh kuwa kale ikhtiyaarrada aan u baahannahay inaan ku sawirno sawir cashar ku saabsan oo aanan uga tagayn wax faahfaahin ah waxaad si fiican u taqaannaa waxqabadka oo dhan inaad ku haysato aaladdaas weyn.
Hadda waa waqtigii waji kale oo aasaasi ah, laakiin taasi ayaa kuu oggolaan doonta sii muuqaalkaas gaarka ah sawir ama sawir meesha aad rabto inaad ku darto qoraal. Waxaan bari doonaa sida loo badalo midabka qoraalka Photoshop. Waxaan sidoo kale dul marnay qaar ka mid ah siyaabaha loo beddeli karo midabka.
Sida loo beddelo midabka qoraalka Photoshop
Tan koowaad waa fur sawir taas oo aan dooneyno inaan ku darno qoraal ama aan abuurno dukumiinti maran. Waxaan kaliya ka furayaa sawir laga soo xulay sawiro
Waxaan doorannaa qalabka qoraalka (T furaha) on toolbar ah
Waxaan gujineynaa sawirka oo aan jiideynaa si aan uxulno sanduuqa qoraalka (tani waxay xadidi doontaa booska qoraalka ku yaal). Waxaan qornaa qoraalka sanduuqa lagu dhex abuuray
Waxaan ku xulanaa a laba jeer guji qoraalka makiinada oo waxaan wax ka badal ku sameyneynaa qolka sare ee toolbar halka ku qoran «tT»
Waxaan samaynaa a dhagsii qaabka (halka qoraalka sawirka wali la xushay) iyo tilmaamayaasha waxaan beddeli karnaa font si aan toos ugu aragno sida qoraalka looga tagay
Hadda waxaan u sii soconnaa xulashada midab doorta kaas oo ku yaal dhinaca midig
A sanduuq qaabeed leh ikhtiyaarro midab badan. Waxaad dooran kartaa midabka aad rabto adigoo u wareejinaya wareegga barxadda weyn ama isticmaalaya baarka xulashada codka
Waxa kale oo aad ikhtiyaar u leedahay inaad dalbato koodhka midabka ee hexadecimal haddii aad mid hore u dooratay hore
Waxa xiga waa inaad gujisaaMaktabadaha midabka»Si aad u aragto midabada Pantone iyo maktabadaha kale
Waad tagi kartaa adiga oo gujinaya kala duwan midab Pantone si markaa mid gaar ah looga doorto daaqadda cusub.
Waxaad sidoo kale ka tagi kartaa tilmaamaha jiirka ee meelaha qaar sawir si loo isticmaalo midab la xiriira midabada sawirka
Guji «OK»Si aad ugu dalbato midabka la xushay qoraalka
Hada riix astaanta OK toolbar si loo dhammeeyo
Waxaad ku dooran kartaa xaraf gaar ah qalabka qoraalka si aad u bedesho midabkiisa sida ka muuqata sawirka. Xusuusnow haddii aad isticmaasho baalasha indhaha inta aad midab u dooraneyso xaraf kasta, waxaad isticmaali kartaa isla codadka sawirka. Kiiskan Waxaan isticmaalay midka leh cirbadaha si loo waafajiyo midabada kala duwan ee bayaanka.
Haddii aad rabto kordhin cabirka qoraalka Adigoon dhex marin aaladda, adeegso ikhtiyaarka beddelka (xakamaynta + T) oo weynee ilaa ay ka waafaqayso sawirka intiisa kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Tababarada » Sida loo beddelo midabka qoraalka Adobe Photoshop
Shaqooyinka midabada leh ee Skwak ee faahfaahinta weyn, waalli iyo hal-abuurka
5 xirmo sumcad oo bilaash ah oo loogu talagalay Halloween